China ABS 3D HIFU ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | MENOBeauty
Mmetụta ngwa ngwa maka ibuli ihu, usoro HIFU na-egbochi mgbochi
Cartridges 8 maka ihu na ahụ
Menobeauty 11 Lines 3D HIFU dị ugbu a bụ ụzọ kacha mma kachasị mma maka ọgwụgwọ maka ibuli ihu, mgbochi ịka nká na iwepụ wrinkles karịa ngwa ndị ọzọ.
Kpụrụ nke 3D HIFU
Ultrasonic na-elekwasị anya na-abanye na oyi akwa SMAS ya na ike ya dị elu na-elekwasị anya na ultrasound, na-emezi nkwusioru SMAS, na-edozi nsogbu ihu na ntụrụndụ nke ihu. Ọ na - edozi ike ultrasonic na SMAS 4.5mm n'okpuru anụ ahụ, na-arụ ọrụ kacha mma nke ịkpụzi, na-adọta ma na-emechi maka uto ahụ na traction; Mmetụta na akwa 3 collagen dị n'okpuru anụ ahụ, na-eme ka arụzigharị collagen na nwa amụrụ ọhụrụ, na-edozi nsogbu ịka nká site na iweghachite agbanwe, akpụkpọ ọcha, nhichapụ ahịhịa na pores na-ada.
Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere mmerụ ahụ n'ihi na ike gafere epidermis. Ọzọkwa, ọ nwere ọrụ nke ngwa ngwa adọ, counter compacting na ngwa ndọlị smoothing.
1. MAX ọgwụgwọ maka otu agbapụ (ihu & olu): ogologo 25mm * obosara 1mm-10mm * omimi 3.0mm & 4.5mm; MAX ọgwụgwọ maka otu agbapụ (ahụ): ogologo 25mm * obosara 1mm-10mm * omimi 8.0mm & 13mm .User nwere ike idozi oke dị ka ihe ị chọrọ.Ọdịdị nke otu égbè dị ukwuu karịa ndị ọzọ, n'ihi ya, ọ bụghị naanị na ọ ga-ebelata oge dị ukwuu iji rụọ ọrụ igwe HIFU n'otu ihu ma ọ bụ n'olu ma ọ bụ n'anụ ahụ, kamakwa mee ka isi ike nke akpụkpọ ahụ bụrụ otu. na ọgwụgwọ ka mma.
2 Ọ na - ewepụta teknụzụ dị elu kachasị elu, na - arụ ọrụ nke ọma na omimi dị iche iche dị ka ọnọdụ ihu ihu si kwadoo isi atọ. Ike na - ejikọ akpụkpọ ahụ na ọgwụgwọ, ọ nweghịkwa mmerụ ahụ ọ bụla. Ka ọ dị ugbu a, omimi nke ịgwọ isi na-arụ ọrụ na anụ ahụ kwekọrọ na ntinye ntọala, na-eme ka onye ahịa ghara inwe mgbu ma nwee ahụ iru ala.
3 Ọ nwere mmetụta dị ọkụ na collagen na collagen na eriri collagen nakwa ihe na-akpali akpali nke ọkụ na oyi akwa na SMAS, nke ọgwụgwọ ya karịrị ihe niile rf teknụzụ.
4 Ọ dị mfe ma dịkwa mma maka ịrụ ọrụ, ọ nweghịkwa ihe ndị a na-eri eri chọrọ, nke na-echekwa ụgwọ ọgwụgwọ ahụ nke ukwuu.
5 Tighting mmetụta na shaping mmetụta doro anya mgbe ọgwụgwọ. Enwere ike idobe ya ma ọ dịkarịa ala ọnwa 18 ruo 24 mgbe otu ọgwụgwọ gwọchara ma chọpụta uto na-adịghị mma nke afọ akpụkpọ ahụ otu ugboro n'afọ.
6 Ndụ na arụ ọrụ nkịtị agaghị enwe mmetụta ma ọ bụrụ na i mechaa oge ahụ
Nke gara aga: Vetikal na-esiji esiji hifu
Osote: Usoro Slimming Focushape
11 Ahịrị 3d Hifu Maka Nwelite Ihu
Ngwaọrụ slimming 3d
3d Hifu Maka Wrinkl iwepụ
Hifu 3d igwe
Multi Lines 3d Hifu Ngwaọrụ
Ọla edo 3D HIFU
Ochie ịka nká 11 ahịrị HIFU
11 ahịrị HIFU maka ihu & ahụ
100% metal ihe onwunwe 11 ahịrị HIFU maka ihu & ...
Pink Ngwongwo 3D HIFU